Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Ede Nyocha Online? | Martech Zone
Ọ bụrụ n'ịcheghị nyocha dị n'ịntanetị bụ nnukwu ihe… naanị lelee onye ahịa anyị anya, Ndepụta Angie, ugbu a ụlọ ọrụ ọha na eze gbadoro ụkwụ na oke nchekwa data dị elu Ntụle tụkwasịrị obi. Na eziokwu na ha anaghị ekwe ka nyocha ndị a na-amaghị aha ma ọ bụ nyocha site n'aka ndị na-anaghị akwụ ụgwọ na-egbochi ndị na-egwu egwu na ndị aghụghọ maka ahụmịhe dị egwu. Ndị ahịa ha hụrụ ha n'anya… naanị jụọ ha.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ dị ka ndị ahịa na-arịwanye elu na saịtị nyochaa n'ịntanetị, ọgbakọ na ngwa iji kọwaa echiche ha gbasara ọrụ ha nwetara. Mana dịka o siri pụta, ọ bụghị onye ọ bụla ka a na-akwalite site na isi ma ọ bụ n'efu.
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ, ọkachasị nke ime obodo, na ị naghị enyocha aha gị na ntanetị na nyocha - ọ nwere ike ịkọwa ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị nwere nyocha nsogbu, ha ga-adọkpụ ahịa gị. Ndị ahịa hụrụ nyocha n'anya ma jiri ha mee mkpebi ịzụta kwa ụbọchị. Gị nyocha ekwesighi izu oke, ma ha kwesịrị ịbụ ndị a tụkwasịrị obi na ndị e dere ede nke ọma. Y’oburu n’inwere ndi ike n’adighi na-anochite anya ngwa ahia ma obu aka oru gi nke oma, I gha acho iru oru rio ha n’aka ndi ahia gi huru gi n’anya.
Nke a bụ ụfọdụ nnukwu stats sitere na nke a ozi sitere na Demandforce na nyocha:
Tags: choroNyocha banyere ntanetịNyocha
Nyocha ndị dị n'ịntanetị bụ ụzọ dị ọkụ iji weghachite ụlọ ọrụ na ọnụ ụzọ ịbịaru ma tụleghachi usoro ahịa ha. Hụ ihe na-arụ ọrụ, ma hụ nke na-adịghị arụ ọrụ. Echere m na a na-adọta ndị mmadụ ka ha dee nyocha ntanetị n'ihi na anyị hụrụ n'anya ịkekọrịta ihe ọ bụla dị mma anyị zutere ugbu a, ma ọ bụ na anyị chọrọ ịdọ ndị ọzọ aka na ntị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ na-alaghachi mgbe niile na mkpa ụmụ mmadụ ijikọ & ịkekọrịta.